Eny, mpanamboatra milina menaka sakafo mandritra ny 14 taona mahery izahay.
2. Ahoana ny fomba hisafidianana ny tsara?
Alefaso azafady aminay amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny Internet ireo zavatra takiana amin'ny antsipirihany, ary izahay dia hanome vokatra mifanaraka amin'ny zavatra takianareo.
3. Manana milina ao anaty tahiry ve ianao?
Tsia, ny masininay dia novokarina araky ny angatahinao.
4. Ahoana no fomba andoavako izany?
A: Manaiky fandoavam-bola be dia be izahay, toy ny T / T, Western Union, L / C ...
5. Tsy hahomby amin'ny fitaterana ve izany?
A: Aza manahy azafady. Ny entanay dia tototry ny fenitra mifanaraka amin'ny fenitra fanondranana.
6. Manolotra fametrahana any ivelany ve ianao?
Handefa injeniera matihanina izahay hanampy anao hametraka ny milina solika, ary hampiofana ny mpiasao malalaka.
USD80-100 isan'olona isan'andro, sakafo, trano ary tapakilan'ny rivotra no ho an'ny mpanjifa.
7. Inona no tokony hataoko raha tapaka ny faritra sasany?
A: Azafady, aza manahy, masinina samy hafa, nitafy faritra izahay nandritra ny fiantohana 6 na 12 volana, fa mila mpanjifa miantsoroka ny sarany fandefasana. Azonao atao koa ny mividy aminay aorian'ny 6 na 12 volana.
8. Inona ny vokatry ny menaka?
Ny vokatra azo avy amin'ny menaka dia miankina amin'ny atin'ny menaka amin'ny fitaovanao, raha avo ny menaka ateraky ny fitaovanao, dia afaka mahazo menaka tena ilaina ianao. Amin'ny ankapobeny, ny ambin'ny solika ho an'ny Screw Oil Press dia 6-8%. ny ambin-tsolika an'ny solitany solitany dia 1%
9. Azoko ampiasaina ve ilay masinina hitrandrahana akora akora maromaro?
Eny Mazava ho azy. toy ny sesame, voana tanamasoandro, soja, voanjo, voanio, sns
10. Inona ny fitaovan'ny masininao?
Haja karbonika na vy tsy misy fangarony (Karazana mahazatra dia SUS304, azo namboarina mifanaraka amin'ny fangatahanao izy)
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Mpanondraka solika, Masinina fanaovan-gazety solika, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Gazety Oliva Oliva, Mpanondraka solika voa,